Budata Barber Chop maka gam akporo [Egwuregwu] - Luso Gamer
N'ihi ya, ị nwetara caliber ma dị njikere ịka nka nka n'ịkpụ ntutu na-enweghị usoro. Mgbe ahụ ị ka mma ibudata na wụnye ọhụrụ Barber Chop Apk. Egwuregwu a bụ n'efu ka ibudata ma ọ chọghị ndenye aha adịchaghị maka ịnweta ya.
N'ebe ahụ ọtụtụ ngwa mma ndị ọzọ nwere ike ịnweta. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime nyiwe enwere ike iru n'ịntanetị dị oke ọnụ ma nwee ike ịrịọ maka ndenye aha. Na-azụtaghị ndenye aha, ọ gaghị ekwe omume ịnweta ndị ahụ.
Ma taa ebe a anyị wetara online free Egwuregwu 3D, nke na-enyere ndị na-egwu egwuregwu aka igosi nkà egwuregwu. Ihe niile ha chọrọ ime bụ ịwụnye egwuregwu ahụ ma gosipụta nkà ha na-akpụ ntutu. Ọ bụrụ na egwuregwu ahụ masịrị gị wee budata BarBer Chop Game site na ebe a.
Kedu ihe bụ Barber Chop Apk
Barber Chop Apk bụ egwuregwu ịntanetị gbakwunyere na-anọghị n'ịntanetị nke Lajeune & Associates, LLC haziri. Ebumnuche nke ịhazi egwuregwu ahụ bụ iji nye ikpo okwu echekwara. Ebe ndị egwuregwu nwere ike ịka nka ịkpụcha ngwa ngwa site na iwepu ntutu mara mma.
Ndị egwuregwu gam akporo agbalarị ọtụtụ egwuregwu egwuregwu n'ịntanetị. Nke dị mma na egwuregwu yana dakọtara na ngwaọrụ dijitalụ niile. Mana ịnweta dashboard bụ isi chọrọ ndenye aha adịchaghị. Enweghị ikike ịzụrụ ihe, ọ gaghị ekwe omume ịnweta egwuregwu ndị ahụ.
Egwuregwu ịma mma n'ịntanetị gụnyere etemeete, ejiji, ọdịdị, ejiji na ndị ọzọ. Taa egwuregwu anyị na-egosi ebe a metụtara ịkpụ ntutu. Ọbụlagodi ọtụtụ ndị mmadụ na-eche mgbe niile ịkpụ ntutu ma mee ka anya pụrụ iche.
Mana mgbe ị na-eleta ezigbo ndị na-akpụ isi mgbe ahụ ha nwere ike ha agaghị enwe ike nweta atụmatụ ha chọrọ. N'ihi ntutu isi na-enweghị afọ ojuju, ọtụtụ ndị ọbịa na-enwe nkụda mmụọ. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ị nwetara nka dị mma n'ihe gbasara ịkpụ ntutu, ị ga-ebudata Barber Chop Android.
Aha ngwugwu com.lajeuneandassociatesllc.barberchopdev
Category Egwuregwu - Mma
Nbudata na ntinye nke ngwa dị mfe. Dị nnọọ download ọhụrụ version nke Apk si ebe a. Wee malite usoro nrụnye wee nweta ohere n'efu na isi dashboard. N'ime dashboard isi, etinyere ọtụtụ ihe dị iche iche.
Ndị ahụ gụnyere ngwa ịkpụcha, agwa Anime, ụdị ntutu na nhọrọ nseta ihuenyo. Ruo ugbu a, mkpụrụedemede anime iri na isii dị maka ịhọrọ. N'ime ndị 16 ahụ bụ ụmụ nwanyị, 6 Okenye nwoke, 9 Santa Claus na 2 Teenager.
Ọ bụ ezie na ndị mmepe na-eme atụmatụ ịgbakwunye ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ. Gụnyere mkpụrụedemede anime na mkpụrụedemede a kpọtụrụ aha nwere ike ịhọpụta n'ụbọchị na-abịa. Egwuregwu egwu na-enye ihe ngosi 3D nke na-eme ka ndị egwuregwu nwee mmasị na-akpali akpali n'akụkụ niile.
Ihe mgbakwunye kacha eme ka egwuregwu ahụ bụrụ ihe na-atọ ụtọ bụ akara igwefoto arụnyere arụnyere. Ugbu a ịhọrọ akara ngosi foto ga-enye ndị egwuregwu ohere ịse foto dị iche iche. Ozugbo ịmechara ịse foto selfie wee bubata ya n'ime ngwa.
Ugbu a na-enye ịkpụ ntutu pụrụ iche na ntutu isi gị. Cheta na njirimara a bụ n'efu ịnweta ma chọọ akaụntụ. Nke a pụtara inweta nhọrọ chọrọ ndebanye aha. Ikiri mgbasa ozi ga-enyere aka n'ịkpọghe ihe ndị na-egbu egbu. Yabụ dị ka egwuregwu ahụ wee wụnye Barber Chop Download n'ime ama.
Ngwa egwuregwu bụ n'efu ịnweta.
Ịmekọrịta egwuregwu ahụ na-enye ihe ngosi 3D pụrụ iche ịkpụ.
Ebe ndị sonyere nwere ike ime nke ọma na ịkpụ ntutu.
Ihe na-ewepu ntutu dị iche iche dị maka ịhọrọ.
A na-agbakwunye ọtụtụ atụmatụ n'ime gallery.
Nhọrọ mbugharị zuru ezu ga-enyere aka iwepu ntutu miri emi.
Clip Guard bụ ike iru iji wedata ọkpụrụkpụ ntutu.
Iji nweta ntutu isi dabere selfie biko buru ụzọ debanye aha.
Ikiri mgbasa ozi ga-enyere aka n'ịkpọghe ihe ndị na-egbu egbu.
Otu esi ebudata Barber Chop Apk
Kama na-awụlikwa elu ozugbo kwupụta echichi na itinye n'ọrụ nke ngwa. Nzọụkwụ mbụ bụ nbudata na maka ndị ọrụ android nwere ike ịtụkwasị obi na weebụsaịtị anyị. N'ihi na ebe a na webụsaịtị anyị, anyị na-enye naanị ezigbo faịlụ Apk mbụ.
Iji jide n'aka na nchekwa na nzuzo nke ndị egwuregwu, anyị goro otu ọkachamara nke nwere ndị ọkachamara dị iche iche. Ọ gwụla ma ndị otu ahụ ji n'aka na ọ ga-arụ ọrụ nke ọma nke Apk. Ọ dịghị mgbe anyị na-enye ngwa egwuregwu n'ime ngalaba nbudata.
Ọ Dị Mma Iji Wụnye Egwuregwu ahụ
Ngwa egwuregwu anyị na-enye ebe a bụ nke izizi na Play Store kwadoro ya. Anyị wụnyere egwuregwu n'elu dị iche iche android smartphones na hụrụ ọ dịghị isi nke. N'ihi ya, ndị na-egwu egwuregwu nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu na-enweghị nchekasị.
A na-ebipụta ngwa egwuregwu gam akporo dị iche iche ebe a na webụsaịtị anyị. Nke dị mma na egwuregwu ma na-enye ma ọnlaịnụ na ọnọdụ offline. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị igwu egwuregwu ndị ahụ, soro njikọ ndị a. Ndị ahụ bụ My Town World Apk na FEnyemaka NAF chọrọ Apk.
Ọ bụrụ na ị na-egwu egwu doro anya n'ihe gbasara ịkpụ ntutu. Mgbe ahụ, nke a bụ ohere kacha mma gị ikpe ikpe ịkpụ nka wụnye Barber Chop Apk. Kedu nke enwere ike ibudata site na ebe a na otu pịa nhọrọ n'efu.
Categories Mma, Egwuregwu Tags Egwuregwu 3D, Barber Chop Android, Barber Chop Apk, Nbudata Barber Chop, Egwuregwu Barber Chop Mail igodo
Nbudata VTube Studio maka gam akporo (2D Anime)